ट्रम्पको आइक्यु स्तर कति ? - Naya Patrika
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रायः आफ्नो आइक्यु स्तरका बारेमा कुरा गर्छन् । हालै ट्रम्पले भनेका थिए– उनको आइक्यु स्तर विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनको भन्दा बढी छ । यसअघि पनि ट्रम्पले धेरैपटक आफ्नो आइक्युबारे बोलेका थिए । सन् ०१३ मा उनले ट्विट गरेर आफ्नो आइक्युस्तर बाराक ओवामा र जर्ज डब्लु बुसको भन्दा ज्यादा भएको बताएका थिए ।
अमेरिकन मेनसाका मनोवैज्ञानिक डा. फ्रैंक लाँसिसका अनुसार सामान्यतया बुद्धि परीक्षणमा स्थान आधारित, मात्रात्मक र मौखिक कौशललाई नमुनाको रूपमा लिइन्छ । स्थान आधारित, सीप र मापन सम्बन्धित प्रश्न सोधिन्छ । मात्रात्मक कौशलमा गणितका प्रश्न र मौखिक कौशलका लागि शब्दसँग सम्बन्धित प्रश्न सोधिन्छ । मेनसाले तिनै व्यक्तिहरूको नतिजालाई स्वीकार गर्दछ, जो शीर्ष दुई प्रतिशत अंक पाउँछन् । बढीमा यो आइक्युको स्तर १३० सम्म बन्छ ।
प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका पोलिटिक्स एमेरिट्स प्रोफेसर फ्रेड आई ग्रिनस्टिनले राष्ट्रपतिहरूको क्षमता जाँच्न ६ गुणहरूको सूची बनाएका छन् । यो सूचीमा जनतासँगको सम्बन्ध, संगठन बनाउने क्षमता, राजनीतिक कौशल, दूरदृष्टि, संज्ञानात्मक शैली र भावनात्मक बुद्धिमत्ता सामेल छ ।
भर्जिनिया विश्वविद्यालयका प्रेसिडेन्सियल स्टडिजका निर्देशक डा. बारबरा ए पैरीका अनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रपतिहरूको आइक्यु स्तरको सूची बनाएको छैन । यद्यपि राष्ट्रपतिहरूको आइक्यु स्तर सूची बनाउन उनको विश्वविद्यालयबाट ‘फी बेटा काप्पा‘को सूची लिन सकिने बताउँछिन् । फी बेटा काप्पाको सुरुवात १७७६ मा भएको थियो । पूरै अमेरिकाको २८६ टप कलेजबाट लिबरल आर्टस् र विज्ञान विषयमा ग्रेजुएट विद्यार्थीलाई यो सम्मान दिने गरिन्छ । अमेरिकाको ४४औँ राष्ट्रपतिहरूमध्ये १७ राष्ट्रपति फी बेटा काप्पाको सदस्य छन्, जसमा बिल क्लिन्टन, जर्ज डब्लु बुस र जिमी कार्टर पनि सामेल छन् । यसबाहेक सन् २००६ मा क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले अनुमान गरेको थियो कि जोन क्विन्की एडम्स सबैभन्दा बुद्धिमान राष्ट्रपति हुन् ।
डाक्टर पैरी भन्छिन्, ‘मलाई लाग्छ राष्ट्रपति ट्रम्पको आइक्यु स्तर जारी गरेमा सायद अनुमान गरेकोभन्दा बढी निस्किन्छ ।’ उनी भन्छिन्, ‘मानिसहरू प्रायः ट्रम्पलाई बेबकुफ र पागल भन्छन्, तर म बाजी लगाउन सक्छु कि उनको आइक्यु स्तर हामीले अनुमान गरेकोभन्दा पनि धेरै हुनेछ ।’ प्रिन्सटन विश्वविद्यालयमा पोलिटिक्स एमेरिटस प्रोफेसर फ्रेड आई ग्रिनस्टिनले राष्ट्रपतिहरूको क्षमता जाँच्न ६ गुणहरूको सूची बनाएका छन् । यो सूचीमा जनतासँगको सम्बन्ध, संगठन बनाउने क्षमता, राजनीतिक कौशल, दूरदृष्टि, संज्ञानात्मक शैली र भावनात्मक बुद्धिमत्ता सामेल छ ।
अन्तमा प्रश्न उठ्छ कि राष्ट्रपति ट्रम्पको आइक्यु स्तर माथि छ कि तल ? यो प्रश्नको जवाफमा डाक्टर लाँलिस भन्छन्, ‘यदि हामी कसैलाई आइन्सटाइनजस्तो सम्झिन्छौंँ, तर कैयौँपटक ऊ मेनसाको परीक्षणमा राम्रो नतिजा दिन सक्दैन ।’ जेहोस् छिट्टै आममानिसलाई ट्रम्पको वास्तविक आइक्यु स्तर पत्ता लागोस् भनेर मेनसाले डोनाल्ड ट्रम्प र अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसन दुवैलाई आइक्यु लभेल जाँच गर्न निम्तो दिएको छ ।